MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardShal Pyaw FAQs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Promotions »Shal Pyaw
“ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်သာဆုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထား ၁မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
– MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ်
– အခြားအော်ပရေတာနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ််မိနစ်လျှင် ၂၅ကျပ်
– အင်တာနက်အသုံးပြုပါက 1MBလျှင် ၈ကျပ်
– စာတိုပေးပို့ပါက တစ်စောင်လျှင် ၁၅ကျပ်
*234*3# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး ရှယ်ပြောအစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
3 . "ရှယ်ပြော" အစီအစဉ်ကိုရယူထားပါက အင်တာနက် ပက်ကေ့ချ်များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။
၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ MPT ၏ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အားလုံးကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင်လည်း ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 1MB လျှင် ၁ကျပ်သာကျသင့်မည့် ပက်ကေ့ချ်များအပါအဝင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ် မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
4. "ရှယ်ပြော" အစီအစဉ်ကိုရယူထားပါက Happy Friday Data အပိုဆုများကို ရရှိနိုင်မှာပါလား။
ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆွေသဟာအစီအစဉ်တွင် ရရှိနေသည့် အပိုဆုများ(ဥပမာ – Happy Friday Data အပိုဆု အစရှိသဖြင့်) နှင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့် အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ – Balance Transfer၊ ယူထား၊ CRBT အစရှိသဖြင့်) တို့ကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
5. လက်ရှိမှာ အင်တာနက် ပက်ကေ့ချ်အသုံးပြုနေပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒေတာ ပမာဏမကုန်ခင်မှာ "ရှယ်ပြော" အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလိုက်လျှင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါသလဲ။
ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပမာဏကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
6. ကျွန်တော်က Basic Tariff အစီအစဉ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ Basic Tariff အစီအစဉ်အသုံးပြုနေချိန်မှာ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာပါလား။
Base Tariff အစီအစဉ် အသုံးပြုနေချိန်တွင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆွေသဟာအစီအစဉ်(သို့မဟုတ်) ရှယ်ပြောအစီအစဉ် (သို့မဟုတ်) ရွှေစကားအစီအစဉ်ကို ဦးစွာပြောင်းလဲရယူပြီးမှ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
6. ကျွန်တော်က CDMA ဖုန်းအသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မှာပါလား။
CDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။